မာန်သီဟထွန်း – အင်ပါယာများ၊ ဘုရင်များ - MoeMaKa Media
Home / Man Thiha Tun / Sapiens / Translation / Variety / မာန်သီဟထွန်း – အင်ပါယာများ၊ ဘုရင်များ
မာန်သီဟထွန်း – အင်ပါယာများ၊ ဘုရင်များ
(မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀ ၊ ၂၀၁၉
ဒါတွေဟာ အထင်ကြီးလေးစားစရာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ရောမအင်ပါယာ၊ ဖာရိုးဘုရင်တွေရဲ့ အီဂျစ်ပြည် စတာတွေရဲ့ ‘ကြီးမားတဲ့ စုပေါင်းချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်မှု’ နဲ့ပတ်သက်ပြီး တောက်ပတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ ရင်မှာပိုက်မထားဖို့လိုပါတယ်။ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အများကိုအကျိုးရှိစေသယောင်ဖြစ်ပေမယ့် အမြဲတမ်း တန်းတူညီမျှ အကျိုးစီးပွားရတာ၊ လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတွေရဲ့ စုပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု တော်တော်များများဟာ လူသားတွေကို ဖိနှိပ်ခြင်း၊ အမြတ်ထုတ်ခြင်းဘက်ကိုသာ ဦးတည်သွားကြတယ်။ အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာတဲ့ စုပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို လယ်သမားတွေက သူတို့ရဲ့ အဖိုးတန် ပိုလျှံတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ ပေးဆပ်ရတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဘုရင့်အမိန့်တော်ဆိုတဲ့ ကလောင်တစ်ချက်အောက်မှာပဲ အခွန်ကောက်ခံသူတွေက သူတို့တစ်နှစ်စာ ကြိုးစားလုပ်ထားသမျှကို အပြောင်သိမ်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ကျန်ခဲ့ကြရတာပဲ။ ကျော်ကြားတဲ့ ရှေးရောမ အမိုးပွင့်စင်မြင့်တွေကို ကျွန်တွေကဆောက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီမှာ သုံ့ပန်းကျွန်တွေ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ရက်စက်တာကို ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ယစ်မူးနေတဲ့ ရောမသားတွေက ထိုင်ကြည့်ခဲ့ကြတာပဲ။ ချွေးတပ်စခန်းတိုင်း၊ အချုပ်ထောင်တိုင်းဟာလည်း စုပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုတွေပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူစိမ်းတွေကပဲ ဒါတွေ လည်ပတ်အောင် အတူစုပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြရတာကိုး။
အခုလိုမျိုး ရှေခေတ် မက်ဆိုပိုတေးမီးယား၊ တရုတ် ချင်မင်းဆက် ကနေ ရောမအင်ပါယာတွေ အထိ စုပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုတွေ အကုန်လုံးဟာ စိတ်ကူးယဉ်အဖွဲ့အစည်းတွေပါ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေကို တည်တံ့စေခဲ့တဲ့ လူမှုရေးသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ အဲဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အချင်းချင်းသိကျွမ်းတဲ့အပေါ် သို့မဟုတ် သူတ့ိုဗီဇစိတ်ကသိနေတဲ့ သိစိတ်အပေါ် အခြေမခံပါဘူး။ သို့ပေမယ့် သူတို့အားလုံး လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းအရာအပေါ်မှာပဲ အခြေခံပါတယ်။
စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းအရာတွေက အင်ပါယာတွေကို ဘယ်လိုလုပ် တည်တံ့စေခဲ့တာပါလဲ။ ပူဂျူးကားကုမ္ပဏီကို ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ သမိုင်းထဲက လူသိအများဆုံး စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းအရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဓဥပဒေ ဘီစီ ၁၇၇၆ ကို ကျွန်တော်တို့ အခု ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။ လူဦးရေသိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရှေးခေတ်ဘေဘီလုံသားတွေကို အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာ အဲဒီဥပဒေကို စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မှုလက်စွဲစာအုပ်အဖြစ် သုံးခဲ့ကြတယ်။ နောက်တစ်ခုက အေဒီ ၁၇၇၆ ခုနှစ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းပါ။ အဲဒါကို ဒီနေ့အထိ သန်းရာနဲ့ချီတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကို အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာ စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မှု လက်စွဲစာအုပ်အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဘီစီ ၁၇၇၆ မှာဆိုရင် ဘေဘီလုံဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံသား တစ်သန်းကျော်နဲ့အတူ ဘေဘီလုံအင်ပါယာကလည်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအင်ပါယာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသ တော်တော်များများကို အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့ခေတ် အီရတ်၊ ဆီရီးယား၊ အီရန်တို့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအထိပါဝင် ပါတယ်။ ဒီနေ့အထိ လူသိအများဆုံး ဘေဘီလုံဘုရင်ကတော့ ဟမ်မူရာဘီ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလိုနာမည်ကြီးရတာက သူ့နာမည်ပါတဲ့ ဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဓ ဥပဒေကြောင့်ပါ။ ကိုဓဥပဒေမှာ တရားဥပဒေတွေ၊ ဖြတ်ထုံးတွေကို စုစည်းထားပြီး ဟမ်မူရာဘီကို တရားမျှတတဲ့နေရာမှာ စံထားအပ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါး လို ဖော်ပြထားတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဘေဘီလုံအင်ပါယာ တဝှမ်းလုံးမှာ ပိုမို တသမတ်တည်းဖြစ်လာတဲ့ တရားဥပဒေစနစ်အဖြစ် လိုက်နာခဲ့ကြတယ်။ နောင်လာနောက်သားတွေ အတွက်လည်း တရားမျှတမှုဆိုတာ ဘာလဲ၊ တရားမျှတတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဟာ ဘယ်လိုပြုမူရသလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စံနမူနာယူစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောင်မျိုးဆက်တွေကလည်း အဲဒါကို သတိပြုမိခဲ့ကြတယ်။ ရှေးခတ် မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသက ပညာရှင်တွေ၊ ဗျူရိုကရက်အုပ်ချုပ်သူ အထက်တန်းစားတွေက ဒီဥပဒေတွေကို စည်းမျဉ်းဥပေဒပြဋ္ဌာန်းချက်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ စာကူးသူတပည့်တပန်းတွေကလည်း ဟမ်မူရာဘီကွယ်လွန်တာကြာမြင့်လို့ သူ့အင်ပါယာပျက်စီးယို့ယွင်းသွားပြီဖြစ်ပေမယ့် ကိုဓဥပဒေကိုတော့ ဆက်လက်ကူးယူ ဆင့်ပွားခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဓဥပဒေဟာ ရှေးခေတ် မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသရဲ့ လူနေမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို နားလည်စေတဲ့ အထောက်အထားကောင်း တစ်ခုပါ။
အဲဒီ ဥပဒေစာသားကို မက်ဆိုပိုတေးမီးယားနတ်အပေါင်းတို့ရဲ့ အကြီးအမှုးနတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ အာနူ၊ အင်လေ နှင့် မာဒု တို့က ဟမ်မူရာဘီ ကို ရာထူးအာဏာ ခန့်အပ်တာနဲ့အစပြုပါတယ်။ ဟမ်မူရာဘီက ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာ တရားမျှတမှု ပျံ့နှံ့ဖို့၊ ကောက်ကျစ်သူ၊ တရားမဲ့သူတွေ ပျောက်ကွယ်သွားဖို့၊ အားနည်းသူကို အားကြီးသူက ဖိနှိပ်တာတွေ ကာကွယ်ဖို့ စတာတွေလုပ်ရမှာပါ။ အဲဒီနောက်မှာ “ဒီလို..ဒီလိုဖြစ်ရင်.. ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ရမယ်” ဆိုတဲ့ ဖြတ်ထုံးဖော်မြူလာ အခု ၃၀၀ ကို တန်းစီဖော်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖြတ်ထုံး ၁၉၆- ၉ နှင့် ၂၀၉ - ၁၄ တို့မှာ ဖော်ပြထားတာက..
၁၉၆. အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်က အခြားအထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်ကို မျက်စိကန်းစေခဲ့လျှင် ထိုလူကိုလည်း မျက်လုံးကန်းစေရမည်။
၁၉၇. အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်က အခြားအထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်၏ အရိုးကိုကျိုးစေလျှင် ထိုသူ၏အရိုးကို ပြန်ချိုးရမည်။
၁၉၈. အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်က သာမန်လူတန်းစား တစ်ယောက်ကို မျက်စိကန်းစေလျှင် သို့မဟုတ် အရိုးကိုကျိုးစေလျှင် ငွေအလေးချိန် ၆၀ ရှဲကယ် ကို ချိန်တွယ်ပေးလျော်ရမည်။
၁၉၉. အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်က အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်ကျွန်၏ မျက်လုံးကို ကန်းစေလျှင် သို့မဟုတ် အရိုးကိုကျိုးစေလျှင် ထိုကျွန်ကိုဝယ်ယူသောတန်ဖိုး၏တဝက်ကို ငွေအလေးချိန်ဖြင့် ချိန်တွယ်ပေးလျော်ရမည်။
၂၀၉. အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်က အထက်တန်းစားအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ရိုက်နှက်သောကြောင့် ကလေးပျက်ကျစေလျှင် သူမ၏သားအတွက် ငွေသား ၁၀ ရှဲကယ် ကို ချိန်တွယ်ပေးလျော်ရမည်။
၂၁၀. အကယ်၍ ယင်းအမျိုးသမီး သေဆုံးခဲ့သည်ရှိသော် ထိုအထက်တန်းစားလူ၏ သမီးကို သတ်ရမည်။
၂၁၁. အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်က ရိုက်နှက်၍ သာမန်လူတန်းစားမိန်းမတစ်ယောက် ကလေးပျက်ကျခဲ့လျှင် ငွေသား ၅ ရှဲကယ် ချိန်တွယ်ပေးလျော်ရမည်။
၂၁၂. အကယ်၍ ယင်းအမျိုးသမီး သေဆုံးခဲ့သည်ရှိသော် ငွေသား ၃၀ ရှဲကယ်ကို ချိန်တွယ်ပေးလျော်ရမည်။
၂၁၃. အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်က အခြား အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်၏ ကျွန်မိန်းမတစ်ယောက်ကို ကလေးပျက်ကျအောင် ရိုက်နှက်ခဲ့လျှင် ငွေသာ ၂ ရဲှကယ်ကို ချိန်တွယ်ပေးလျော်ရမည်။
၂၁၄. ယင်းကျွန်မိန်းမ သေဆုံးခဲ့လျှင် ထိုလူက ငွေသား ၂၀ ရဲှကယ်ကို ချိန်တွယ်ပေးလျော်ရမည်။
အခုလို ဖြတ်ထုံးတွေ အစဉ်လိုက်ထားရှိပြီးတော့ ဟမ်မူရာဘီက တဖန်ကြေငြာပါတယ်။
ဤသို့သော တရားသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် စွမ်းအားကြီးသောဘုရင် ဟမ်မူရာဘီက သတ်မှတ်သောအရာဖြစ်၍ မြေပြင်တခွင်လုံးတွင် အမှန်တရားနဲ့အညီ သင့်လျော်မှန်ကန်သော အသက်မွေးမှုကို ပြုရန် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ငါသည် မြင့်မြတ်သော ဟမ်မူရာဘီဘုရင်ဖြစ်၏။ လူသားတို့ကို ဂရုမစိုက်ခြင်း၊ လျစ်လျူရှုခြင်းအမှုကို ငါမပြု။ နတ်ဘုရား အင်လေက ငါ့အားအပ်နှံ၍ နတ်ဘုရား မာဒုက ငါ့ကို ခန့်အပ်သည်နှင့်အမျှ လူသားတို့ကို ငါ ထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူမည်။
ဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဓဥပဒေအရတော့ ဘေဘီလုံသားတွေရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းဟာ လူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီး ထာဝရတည်မြဲတဲ့တရားမျှတမှုဥပဒေသတွေမှာ အခြေခံတဲ့အပြင်... အဲဒီဥပဒေသတွေကို နတ်ဘုရားတွေက စီမံတာပါ။ လူ့တန်းစားအဆင့်အတန်းဟာလည်း အင်မတန်မှကို အရေးပါ ပါတယ်။ ကိုဓဥပဒေအရဆိုရင် လူသားတွေကို လိင်အမျိုးအစား ၂ ခုနှင့် လူတန်းစား ၃ မျိုးခွဲထားတယ်။ အထက်တန်းစားလူ၊ သာမန်လူ နှင့် ကျွန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားတဲ့လိင်တွေ၊ လူတန်းစားမတူတဲ့ လူတွေဟာ တန်ဖိုးမတူကြပါဘူး။ သာမန်လူ မိန်းမတစ်ယောက်အသက်ဟာ ငွေသား ၃၀ ရဲှကယ် တန်းဖိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်မိန်းမတစ်ယောက်ကတော့ ငွေသား ၂၀ ရှဲကယ်တန်ဖိုးရှိပြီး သာမန်လူ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးဟာ ငွေသား ၆၀ ရှဲကယ် တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ကိုဓဥပဒေက မိသားစုအတွင်းမှာလည်း တင်းကျပ်တဲ့ အထက်အောက်အဆင့်အတန်းတွေ သတ်မှတ်ပါတယ်။ မိသားစုတစ်စုရဲ့ ကလေးတွေဟာ လွတ်လပ်တဲ့လူသားတွေမဟုတ်ဘဲ အဲဒီမိသားစုရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းသာဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်က တခြားအထက်တန်းစားလူတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးကို သတ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီလူကို ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ သူ့သမီးကို အဆုံးစီရင်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ ဒါဟာတော်တော် ထူးဆန်းပါတယ်။ လူသတ်သမားက ဘာမှမဖြစ်ဘဲ အပြစ်မဲ့တဲ့သူ့သမီးက သေဒဏ်အပေးခံရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟမ်မူရာဘီနှင့်ဘေဘီလုံသားတွေအတွက်တော့ ဒါဟာ လုံးဝတရားပါတယ်။ ဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဓဥပဒေဟာ ဘုရင်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံး သူတို့အဆင့်အတန်းနေရာကို လက်ခံပြီး အဲဒါနဲ့အညီ ပြုမူနေထိုင်ကြရမယ်။ ဒါဆိုရင် အင်ပါယာထဲမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအားလုံး အတူတကွစုပေါင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ကြမှာပါ.. ဆိုတဲ့အဆို အပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ သူတို့အသိုင်းအဝိုင်းထဲက လူတွေအားလုံးအတွက် လုံလောက်အောင် အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရမယ်။ ကောင်းမွန်စွာ ဝေမျှရမယ်။ ရန်သူကို အတူတကွ ကာကွယ်ရမယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံ့နယ်နမိတ်ကို ချဲ့ရမယ်။ ဒါမှလည်း စည်းစိမ်တွေပွားသထက်ပွားလာပြီး နိုင်ငံလုံခြုံသထက်လုံခြုံလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟမ်မူရာဘီ သေပြီးလို့ နှစ်ပေါင်း ၃၅၀၀ လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ မြောက်အမေရိကမှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ သုံးခုဟာ အင်္ဂလန်ဘုရင်က သူတို့ကို မျှမျှတတ မဆက်ဆံဘူးလို့ယူဆကြတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့မှာ စုဝေးကြပြီး ၁၇၇၆ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှာ အဲဒီကိုလိုနီနယ်တွေမှာ နေထိုင်သူတွေဟာ ဗြိတိသျှဘုရင်ရဲ့လက်အောက်ခံတွေ မဟုတ်တော့ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းကိုလည်း လူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီး ထာဝရတည်မြဲ တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေသတွေလို့ ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ နတ်ဘုရားတွေက ချီးမြှင့်ပေးသနားတဲ့ ဟမ်မူရာဘီကိုဓဥပဒေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန် နတ်ဘုရားက စီမံတဲ့ အရေးကြီးဆုံးဥပဒေသ ဟာ ဘေဘီလုံနတ်ဘုရားတွေရဲ့ အရေးကြီးဆုံးနဲ့တော့ နည်းနည်းကွာတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းမှာ ကြွေးကြော်ထားတာက
“ဤအမှန်တရားများသည် ကျွနု်ပ်တို့ တစ်ဦးချင်းစီတွင် အထင်အရှားရှိပြီး လူသားတိုင်းသည် တန်းတူညီမျှ ဖန်ဆင်းခြင်းခံရကာ မည်သူကမျှ ဖယ်ရှားပြောင်းလဲ၍မရသော အသက်ရှင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ပျော်ရွင်မှုကို ရယူခံစားခွင့် စသည့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်က ပေးအပ်ထားသည်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဓဥပဒေလိုပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံကို တည်ထောင်တဲ့စာတမ်းရဲ့ မြင့်မြတ်မှန်ကန်တဲ့ဥပဒေသအတိုင်း လူသားတွေ လိုက်နာကျင့်ကြံကြရမယ်။ ဒါဆိုရင် သန်းနဲ့ချီရှိတဲ့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေဟာ တရားမျှတ၊ အေးချမ်းလုံခြုံပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကို ကောင်းမွန်စွာ စုပေါင်းတည်ဆောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ ဟမ်မူရာဘီကိုဓဥပဒေလိုပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းကို အဲဒီခေတ်ကလူတွေတင်မကဘဲ အခုခေတ်မျိုးဆက်တွေကပါ တလေးတစားလက်ခံကြတယ်။ အခုဆို နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပါပြီ။ အမေရိကန်ကျောင်းသူ/သားလေးတွေဆိုရင် ဒီလွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းကို ကူးယူပြီး အလွတ်ရအောင်ကျက်မှတ်ကြပါတယ်။
ဒီဥပဒေစာတမ်း ၂ ခုလုံးမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ကွဲလွဲချက်တွေရှိတယ်။ ဟမ်မူရာဘီကိုဓဥပဒေရော၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းရော.. နှစ်ခုလုံးက လူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီး ထာဝရတည်မြဲတရားမျှတတဲ့ ဥပဒေသတွေ လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ လူသားတွေဟာ တန်းတူညီမျှကြပြီး၊ ဘေဘီလုံသားတွေအတွက်တော့ လူသားတွေဟာ တန်းတူညီမျှခြင်း မရှိပါဘူး။ အမေရိကန်တွေကတော့ သူတို့ကမှန်တယ်၊ ဟမ်မူရာဘီက မှားတယ်ပြောမှာပေါ့။ ဟမ်မူရာဘီကလည်း သူမှန်ပါတယ် အမေရိကန်တွေသာ မှားပါတယ်လို့ ပြန်ပြောမှာ အသေအချာပဲ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးလုံး မှားပါတယ်။ ဟမ်မူရာဘီ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံကို တည်ထောင်သူဖခင်ကြီးတွေဟာ လူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီး ထာဝရတည်မြဲတရားမျှတတဲ့ ဥပဒေသတွေရှိတဲ့ ကမ္ဘာမျိုးကို စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြတာပါ။ လူသားအားလုံးတန်းတူညီမယ် သို့မဟုတ် အထက်အောက် အဆင့်အတန်းတွေ ရှိမယ်ပေါ့။ အမှန်က အဲဒီလိုမျိုး လူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေသတွေဆိုတာ ဆေပီယန်စ်တွေရဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးဉာဏ်ထဲမှာပဲ ရှိတာပါ။ ဒီလိုမျိုးအရာတွေဟာ အချင်းချင်း တီထွင်ပြောကြတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ ဒီဥပဒေသတွေမှာ တကယ့်အရှိတရားရယ်လို့ ဘာမှမရှိပါဘူး။
လူတွေကို အထက်တန်းစားလူ နှင့် သာမန်လူအဖြစ် ခွဲခြားထားတာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အပိုင်းအစသက်သက်လို့ လက်ခံရတာလွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူသားအားလုံးဟာ တန်းတူညီမျှပါတယ်ဆိုတာကလည်း စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ကြံပြောဆိုမှု တစ်ခုပါပဲ။ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဆင်ခြင်မှုအရ လူသားတွေအားလုံး တန်းတူညီကြပါတယ်လို့ ပြောနိုင်တာလဲ။ လူသားအားလုံး အမှန်တကယ်တန်းတူညီကြပါတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စဉ်းစားစိတ်ကူးဉာဏ်ဘောင်ကိုကျော်ပြီး အပြင်မှာ တကယ်ပဲ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အရှိတရားအဖြစ် တည်ရှိပါသလား။ လူသားတွေဟာ ဇီဝဗေဒအရ တကယ်ပဲ တန်းတူညီကြပါသလား။ အဲဒီအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းထဲက လူသိအများဆုံးဖြစ်တဲ့စာကြောင်းကို ဇီဝဗေဒ စကားလုံးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားဘာသာပြန်ကြည့်ရအောင်။
ဤအမှန်တရားများသည် ကျွနု်ပ်တို့ တစ်ဦးချင်းစီတွင် အထင်အရှားရှိပြီး လူသားတိုင်းသည် တန်းတူညီမျှ ဖန်ဆင်းခြင်းခံရကာ မည်သူကမျှ ဖယ်ရှားပြောင်းလဲ၍မရသော အသက်ရှင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ပျော်ရွင်မှုကို ရယူခံစားခွင့် စသည့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်က ပေးအပ်ထားသည်။
ဇီဝဗေဒ သိပ္ပံပညာအရကြည့်မယ်ဆို လူသားတွေဟာ ဖန်ဆင်းခံရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာကြတာပါ။ ပြီးတော့ တန်းတူညီမျှဖို့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာကြတာ မဟုတ်တာလည်း သေချာတယ်။ တန်းတူညီမျှတယ်ဆိုတာ ဖန်ဆင်းခြင်းအယူအဆနဲ့ခွဲခွာမရအောင်ကို ပူးတွဲရှိနေတာပါ။ တန်းတူညီမျှတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကို ခရစ်ယာန်အယူဝါဒကနေ အမေရိကန်တွေက ရတာပါ။ ခရစ်ယာန်အယူဝါဒအရ လူသားတိုင်းမှာ မြင့်မြတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိပြီး ဝိညာဉ်အားလုံးဟာ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာ တူညီပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ခရစ်ယာန်အယူအဆတွေဖြစ်တဲ့ ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်၊ ဖန်ဆင်းခြင်းပုံပြင်၊ ဝိညာဉ် စတာတွေကို ကျွန်တော်တို့မယုံဘူးဆိုရင်.. လူသားတိုင်းဟာ တန်းတူညီမျှပါတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရှိပါတော့မလဲ။ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာ ကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံတာပါ။ တူညီမှုအပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ တနည်းအားဖြင့်ကွဲပြားတဲ့ မျိုးရိုဗီဇကုဒ် ရှိတယ်။ မွေးကတည်းကစပြီး ကွဲပြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ အသက်ရှင်ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ စွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာပြီး အသက်ရှင်ကျန်ဖို့အတွက် မတူခြားနားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိလာတယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့ တန်းတူညီမျှဖန်ဆင်းခြင်းခံရသည် ဆိုတာကို ကွဲပြားခြားနားစွာဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာပါသည် လို့ ဘာသာပြန်ရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။
လူတွေဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ဖန်ဆင်းခြင်းမခံရသလို.. ဇီဝဗေဒသိပ္ပံပညာအရဆိုရင် လူတွေကို တစ်ခုခုပေးအပ်မယ့် ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မသိမြင်ရတဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်သာ ရှိတာပါ။ ပြီးတော့ အဲဒါဟာ မည်သို့သောရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘဲ လူတစ်ဦးပြီး တစ်ဦးသာ မွေးဖွားလာကြတာပါ။ ဖန်ဆင်းရှင်က ပေးအပ်တယ် ဆိုတာကို မွေးဖွားလာတယ်လို့ ရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်ရင် ပြီးတာပဲ။
ထို့အတူပဲ ဇီဝဗေဒမှာ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာမရှိပါဘူး။ လူ့အင်္ဂ ါတွေ၊ စွမ်းရည်တွေ၊ စရိုက်လက္ခဏာတွေပဲ ရှိတယ်။ ငှက်တွေပျံတယ်ဆိုတာ ပျံသန်းဖို့အခွင့်အရေးရှိလို့မဟုတ်ဘူး သူတို့မှာတောင်ပံရှိလ့ိုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဒီကိုယ်တွင်းအင်္ဂ ါတွေ၊ စွမ်းရည်တွေ၊ စရိုက်လက္ခဏာတွေကို ဖယ်ရှားပြောင်းလဲလို့မရဘူး ဆိုတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအရာတွေ တော်တော်များများမှာ ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းတွေ အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပါ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပျောက်ဆုံးသွားကြတာပဲ။ ငှက်ကုလားအုတ်တွေဟာ ပျံသန်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည် ပျောက်သွားတဲ့ ငှက်တွေပါ။ ဒါကြောင့် ဖယ်ရှားပြောင်းလဲ၍မရသောလူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို ပြောင်းလဲတတ်သော စရိုက်လက္ခဏာများလို့ ဘာသာပြန်ရမှာပါ။
လူတွေမှာ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲလို့မေးတဲ့အခါ.. အသက်ရှင်သန်ခြင်း လို့ပြောတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဇီဝဗေဒမှာ လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာမရှိပါဘူး။ တန်းတူညီမျှခြင်းတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေ၊ ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီတွေ လိုပဲ.. လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ လူသားတွေ ထွင်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အတွေးစိတ်ကူးထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ ဇီဝဗေဒရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းကလူတွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး၊ အာဏာရှင်အောက်ကလူတွေကတော့ မလွတ်လပ်ဘူးလို့ပြောတာဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ပျော်ရွှင်မှု(happiness) ဆိုတာကရော။ အခုထိတော့ ဇီဝဗေဒသုတေသနတွေက ပျော်ရွင်မှု ဆိုတာကို ရှင်းလင်းတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုနဲ့ မသတ်မှတ်နိုင်ကြသေးဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို တကယ့်အရှိအတိုင်း မတိုင်းတာနိုင်ကြသေးဘူး။ အရသာခံပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇီဝဗေဒလေ့လာမှုတော်တော်များက သိနားလည်ထားတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကပဲ တိုင်းတာရ၊ သတ်မှတ်ရ ပိုလွယ်တာကိုး။ ဒါကြောင့် အသက်ရှင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် ပျော်ရွှင်မှုကို ရယူခံစားခွင့် ဆိုတာတွေကို အသက်ရှင်ခြင်း နှင့် အရသာခံပျော်ရွှင်မှုရရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ ဘာသာပြန်ရမှာပါ။
ဒီတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းထဲက စောစောကစာကြောင်းကို ဇီဝဗေဒ စကားလုံးတွေနဲ့ ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့..
ဤအမှန်တရားများသည် ကျွနု်ပ်တို့ တစ်ဦးချင်းစီတွင် အထင်အရှားရှိပြီး လူသားတိုင်းသည် ကွဲပြားစွာ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာကြကာ ပြောင်းလဲတတ်သော စရိုက်လက္ခဏာများဖြစ်သည့် အသက်ရှင်ခြင်း နှင့် အရသာခံပျော်ရွှင်မှုရရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် မွေးဖွားလာကြသည်။
လူ့အခွင်အရေး နှင့် တန်းတူအခွင့်ရေးရရှိရေး လှုံ့ဆော်သူတွေကတော့ ခုလိုမျိုး ဆင်ခြင်ကောက်ချက်ချပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါသထွက်ကြမှာပဲ။ “ဇီဝဗေဒအားဖြင့်တော့ လူတွေဟာ တန်းတူရည်တူ မွေးဖွားမလာဘူးဆိုတာ ငါတို့သိသားပဲ။ ဒါပေမယ့် အနှစ်သာရအားဖြင့်တော့ ငါတို့အားလုံးဟာ တူညီကြတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်ဆိုရင် တည်ငြိမ်ဝပြောတဲ့ လ့ူဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ငါတို့တည်ဆောက်နိုင်မှာ” လို့ ပြန်ပြောဖို့များပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်ဘာမှ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ “စိတ်ကူးယဉ်နိုင်ငံတော်” ဆိုတာ အဲဒါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတာ တကယ့်အရှိတရားအရ မှန်ကန်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်တဲ့အခါ ပိုကောင်းမွန်တဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ထိရောက်စွာစုပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ကျွန်တော်တို့ကို ပေးလို့ပါ။ စိတ်ကူးယဉ်နိုင်ငံတော်တွေဆိုတာ မကောင်းတဲ့လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုတွေ မဟုတ်သလို အသုံးမကျတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ များပြားလှတဲ့လူသားတွေကို ထိထိရောက်ရောက် စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စေတဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းပါ။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းထဲမှာ မှတ်ထားရမှာတစ်ခုက ဟမ်မူရာဘီကလည်း စောစောကဆင်ခြေတွေနဲ့ သူ့ရဲ့အထက်အောက်လူတန်းစား ခွဲခြားတဲ့ ဥပဒေသကို ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါ။ ‘လူတွေဟာ အထက်တန်းစားလူ၊ သာမန်လူ၊ ကျွန် စသည်ဖြင့် ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာ ငါသိသားပဲ။ ဒါပေမယ့် လူတွေ အဲဒီလို ကွဲပြားခြားနားကြတယ်လို့ ငါတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် တည်ငြိမ်ဝပြောတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ငါတို့ ဖန်တီးနိုင်တယ်။’
မာန်သီဟထွန်း – အင်ပါယာများ၊ ဘုရင်များ Reviewed by MoeMaKa on 9:00 AM Rating: 5